Dawladaha Somaliland iyo Kenya oo War-murtiyeed kasoo Wada Saaray Kulamadii Labada Madaxweyne… | Mandheera News
Hargeysa(Mandheeranews)-WAR-MURTIYEED WADA-JIR AH
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si wada jir ah u soo saaray Maanta War murtiyeed ka dhashay wada hadaladii ku dhexmarayey dalka Kenya labadii maalmood ee u danbeeyay, iyadoo Labada hoggaamiye ay isku waafaqeen iskaashi ay ku raadinayaan nabadda gobolka, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada labada dhinac.
Marti-qaadka uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi iyo Waftigiisu ku tageen Waddanka Kenya ayaa ahayd casuumad rasmiya uu ka helay dhigiisa Kenya Mudane, Uhuru Kenyatta, safarkaasi oo qaatay muddo saddex cisho ah, iyagoo wada yeeshay kulamo muhiim ah.
Labada Madaxweyne waxay caddeeyeen sida ay uga go’an tahay inay sii xoojiyaan islamarkaana kor u qaadaan xidhiidhka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Somaliland iyo Kenya, waxaana ay si qoto dheer u lafa gureen in Iskaashiga u dhaxeeya labada dal ee Somaliland iyo Kenya uu salka ku hayo aas-aaska mabaadi’ida gundhigoodu yahay kor u qaadista nabad waarta, xasilooni iyo hodantinimo, iyadoo taasina ku imanaysa iskaashiga labada waddan ee Jamhuuriyadaha Somaliand iyo Kenya.
Madaxweynayaashu waxay caddeeyeen islamarkaana ay isla qaateen in masuuliyad weyni ka saaran tahay sugidda nabadda iyo xasilloonida gobolka oo dhan, si taas looga dhabeeyana waxa lagama maarmaan ah inay raadiyaan horumarka dhaqaale ee Bulshada, labada hoggaamiye waxay isla garteen in Somaliland muddadii ay jirtay ay ahayd dal xasiloon oo nabad-gelyadiisu tahay mid laysku halayn karo isla mar ahaantaana ay taasi sabab u tahay aas-aaska hay’addo dawladeed oo awood leh, ka midho dhalinta dimuqraadiyada iyo xoriyatul qawlka, dawladaha Somaliland iyo Kenya ay sii wadi doonaan inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan arrimaha horumarinta nabada iyo kaabayaasha dhaqaale si loo helo jawi barwaaqo sooran ah.
Muddadii uu socday kulanka wada hadaladu waxa ay labada Madaxweyne diiradda saareen xoojinta ganacsiga ee labada dhinac iyo iskaashiga diblumaasiyadda, suurta gelinta duulimaadyadda tooska ah ee isaga gooshi doona Nariobi iyo Hargeysa, iskaashiga beeraha, horumarinta xoolaha, iyo Tamarta, sidoo kalena xoojinta iskaashiga marsooyinka Berbera iyo Mombasa.
Labada Madaxweyne waxa ay fareen masuuliyiinta labada dawladood inay ka wada shaqeeyaan heshiis guud, kaasi oo ay ku wada shaqayn doonan dawladaha Somaliland iyo Kenya, kor u qaadista xidhiidhka soo jireenka ah, wadaagista macluumaadka si meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagaxisada, danbiyada Internerka iyo kuwa caalamiga ah ee abaabulan, kor u qaadista Waxbarasahada, Beeraha, Tamarta, Xoolaha, Gaadiidka iyo Tababarada.
Si loo hirgeliyo heshiisyada labada dawladood waxay labada Madaxweyne isla qaateen Jadwal lagu anba qaadayo arrimahan.
Labada madaxweyne waxay si wada jira u ballan qaadeen inay sii wadi doonaan ka shaqaynta nabad-gelyada iyo xasiloonida Geeska Africa, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in argagaxisadu tahay mid halis badan ku haysa Gobolka oo dhan, waxaanay ku baaqeen in si heer Caalami ah looga qeyb-galo, waxaanay taageereen dedaaladda lagula dagaalamayo Argagaxisada Geeska Africa.
Labada Madaxweyne waxay qireen dedaalada Kenya ay ugu jirto nabad-gelyada iyo xasilloonida dalka ay jaarka yihiin ee Soomaaliya taas oo keeni karta in dadka Soomaliya ay fursad u helaan inay muujin karaan rabitaankoooda xor ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi waxa uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya Mudane, Uhuru Kenyatta iyo shacabkiisaba marti qaadka rasmiga ah uga mahad celiyey marti-qaadka ay u sameeyeen iyo waftigiisa, taasoo ujeedadiisu tahay xoojinta xidhiidhkii soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeyey labada waddan.
Dhanka kale Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi u rajeeyey caafimaad, cimri iyo dherer, halka uu shacabka Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale uu u rajeeyey nabada iyo xasilloonida waarta.